Xafiiska Wasiirka Warfaafinta DKMG oo Ciidamo Nabadsugida la Dhigay Iyo Wasiirka oo Goordhow Wariyaasha isugu Yeeray | Anti-Tribalism
← Madaxweyne Shariif oo Xalay ka Badbaaday Isku Day Dil Mar uu Booqanaayey Yaaqshiid
Shariif Xasan oo ka soo Hor Jeystay Doorashada Madaxtinimo ee ay Wadaan Xildhibanada. →
Xafiiska Wasiirka Warfaafinta DKMG oo Ciidamo Nabadsugida la Dhigay Iyo Wasiirka oo Goordhow Wariyaasha isugu Yeeray
April 10, 2012 – Muqdisho (Waajidpress) Wasiirka warfaafinta xukuumada KMG Soomaaliya C/qaadir Xuseen Maxamed Jaahweyn ayaa saaka isgu yeeray wariyaasha ku sugan Muqdisho iyadoo warar hordhac ahna ay ka soo baxayaan ujeedada shirkiisa jaraa’id.
Wariyaasha Idaacadaha Muqdisho ayaa soo sheegaya in si weyn loo hadalhayo in wasiirku uu xilka iska casili doono iyadoo la filayo in shirkiisu jaraa’id uu kaga hadlo arimo kala duwan.
Wasiirka oo shalay dalka dib ugu soo laabtay ayaa lagu eedeeyey in wasaaradiisu ay lahayd khaladkii ka dhashay qaraxii ka dhacay tiyaatarka qaranka Arbacadii la soo dhaafay kaasoo in ka badan toban ruux ay ku dhinteen afartameeyo kalana ay u jiifaan isbitaalada.
Madaxweyne Shariif iyo wasiirka arimaha gudaha C/samad Macalin Maxamuud oo si kala gaar ah saxaafada ula hadlay ayaa eeda qaraxii dhacay Arbacadii dusha u saaray wasaarada warfaafinta oo ay sheegeen inaysan ku wargelin hay’adaha amaanka.
Hase yeeshee wasiirka ayaa shalay markii uu ka soo degey garoonka diyaaradaha wuxuu si kulul ugu jawaabay eedeynta uga timid madaxweynaha iyo wasiirka arimaha guidaha oo uu sheegay inay ka warhayeen munaasabada.
Illaa shalay markuii uu wasiirku dib ugu soo laabtay Muqdisho ayaa waxaa cirka isku shareeray hadalheynta ku saabsan cida eeda loo xambaarin doono mar haddii madaxweynaha iyo wasiirka gudaha ay isku dhinac noqdeen iyadoo raysul wasaare Gaas uu weli sheeda ka daawanayo sheekada socota.
Shirkiii jaraa’id ee wasiirka warfaafinta
Markii shalay wasiirka warfaafinta uu shir saxaafadeed ku qabtay garoonka diyaaradaha ayaa waxaa markiiba warqad ay soo qoreen taliyaha nabadsugida iyo taliye ku xigeenka loo diray idaacadda Raadio Muqdisho iyo telefishanka dawlada ee SNTV oo lagu wargeliyey inaysan baahin karin shirka jaraa’id ee wasiirka warfaafinta,m arintaasoo aad uga careysiisay wasiirka.
Ilo wareed ku dhoo wasaarada ayaa Raxanreeb u sheegay in wasiirka laftiisa uu amray agaasimaha telefishanka iyo tifaftiraha idaacadda inay sii daayaan shirkiisa jaraa’id laakiin waxaa xalay idaacadda iyo telefishanka tegey ciidamo iyo saraakiil ka socda nabadsugida oo qaatay cajaladii lagu so duubay shirka jaraa’id si aan loo baahin.
Iyadoo arimahan oo dhan ay jiraan ayaa saaka waabarigii waxaa hay’adda nabadsugida ciidan u dirtay xafiiska wasiirka warfaafinta oo lagu amray iuusan saaka soo shaqo tegi karin taasoo markale muran ka dhex dhalisay ilaalada wasiirka warfaafinta iyo ciidankii tagay xafiiska.